Vehivavy: Tsy zo ny manala zaza | Hery - Tsiky dia ampy |
Dia hoy aho hoe, tsy afaka midina an-dalam-be mantsy ilay zaza ao am-bohoka. Tsy afaka milahatra miantso hoe "aza kitikihina ny zonay hiaina sy ho teraka".
Koa amin'izao andron'ny vehivavy izao dia tiana hamafisina hatrany ilay hoe "Ny fahafahanao dia mijanona eo amin'ny fetran'ny fahafahan'ny hafa". Tsy afaka hanao ny rehetra raha toa ka mikitikitika ny fahafahan'ny hafa koa.
Tsy hiditra amin'ny adihevitra hoe efa olona ve sa tsy olona ny zaza ao an-kibo... fa ny ho avy no jereko. Raha toa ka esorina ny zaza, na mbola tsy olona na efa olona, dia tsy ho olona mihitsy izy amin'ny ho avy. Izay maha-olona amin'ny ho avy izay indrindra no tsy voahaja. Raha manaraka ny lojikan'io fiainana ho avy io dia tsy misy azo ialana bala mihitsy, toa ny hoe tsy ho voataiza, sahirana, tsy mbola te-hiteraka...
Ny vaha olana hany tokana raha te hanala zaza... dia tsy manamboatra zaza. Tsy manao firaisana.
Efa misy ve ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza ao am-bohoka?
(Nalefa amin'ny alalan'ny w.bloggar araka ny fanazavan'i fraz azy ato)